galmudugnews.com » Xiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la’aanta Home Contact US
Home » CAAFIMAADKA, WARARKA » Xiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la’aanta Xiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la’aanta galmudug on
No Comment Views 1623067Himid la’aanta waxaa loo aaneeyaa burbur qoysas badan taasoo ay sababtay raga oo ay ku adag tahay inay aqbalaan inay ku fashilmeen qancinta marwooyinkooda dhinaca sariirta. Meeshii laga waajihi lahaa dhibka waxaa jira rag isku qariya boor iyo qiiq meeshana keena dood aan meeshaba ku jirin. Xeeladaha ay isticmaalaan waxaa ka mid ah iyagoo sariirta yimaada marka marwado seexato. Arintu waxay circa isku shareertaa marka xaqiiqda la wajaho ama runta loo sheego. Dhibkaan waxaa kaloo la ogaaday inuu sababi karo niyad jab & murugo iyo kalsoonida qofka oo hoos u dhacda Himad la’aantu waa cudur ka mid ah cudurada hase yeeshee raga qaarkiis waa ku dhib inay qirtaan si kastaba dhibku ha u darnaadeene. Ninka oo wax laga sheego awoodiisa galmada waxay dadka qaarkii si toos ah ugu fasirtaan in wax laga sheegay raganimada. Intaas waxaa dheer ka hadalka galmada oo dhaqanka Soomaalida ku ah ceeb lagama hadlaan ah, taasina waxay sii murjisaa arinka maadaama ay tahay qarso ha ku qarsatee. Inkastoo dhibkan saameeyo qawmiyado kala hadana waxaa Soomaalida u dheer qaadka oo isaguna caanku ah galmo aan raaxo lahayn. Cilmi-baaris lagu sameeyay Soomaalida Sweden ayaa qaar ka mid ah haweenkii la waraystay soo bandhigeen cabashadooda. Waxay ku calaacaleen inay arintu meel xun gaartay oo dalbadeen furiin haddii aysan nimankoodu joojin cunida qaadka. Waxyaalaha ay ku eedeeyeen qaadka waxaa ka mid ahaa biyo-baxa shahwada oo soo degdegta ama waqtigeeda ka soo hormarta (premature ejaculation). Wadanka Hollanda oo ay dhibkaas qabaan in ku dhow hal malyan waxaa la sameeyay bas loogu magac daray “erection bus” kaasoo ku wareega magaalooyinka si ay u geesinimo galiyaan raga diidan inay qirtaaan hawl-gabnimada galmada. Waxaa la yaab noqotay markay safka hore ee baska buuxiyeen rag da’doodu aysan sidaa u sii waynayn. Waxaa kaloo lagu arkayay rag ay soo khasbeen lamaanahooda oo ay safka kula jiraan. Baskaasi Holland kuma ekaane wuxuu isku soo maray wadamo kale oo dhibkan ka yahay lagama hadlaan “taboo” sida Portugal.
Cilmibaaris lagu sameeyay sababaha furiinka ayaa waaxaa lagu ogaaday tobanka sababood ee ugu badan sababaha burburka qoyska waxaana hogaanka markiiba u qabtay dhibaatooyinka la xiriira galmada iyo gogol dhaafka ay arintaasi sababto. Hadaba si aan amuurahaas wax uga ogaano ayaanu sababaha keeni kara waydiinay Dr Mohamed Abdullahi oo ah dhakhtar ka shaqeeya Waqooyiga London aqoon durugsana u leh kacsi la’aanta, dhibka gudniinka & xakamaynta dhalmada, wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay sidatan: Kacsi la’aanta (Himad la’aantu) waxaa loo aaneeyaa inuu sababo burburka qoysas badan, wuxuuna si gaar ah dhibkiisu u soo shaac baxaa marka da’da ragga ay sii waynaato. Waxaa lagu qiyaasaa inuu dhibkaan saameeyo kala bar ragga da’doodu u dhaxeyso 40-70 sano. Lambarkaasi wuxuu noqdaa 70% markii 70 sano kor loo dhaafo. Waxaa kaloo lo ogaaday in 90% raga qaba dhibkan aysan raadsan wax daawo ah iyagoo dhibkooda iska qarsada.
Mararka qaarkood waxay u dhacdaa si ku meelgaar ah waxaana loo aaneeyaa daalka, murugada, walwalka & walbahaarka. Hase yeeshee waxaa dhici karta inuu noqdo cilad joogto ah ama soo noqnoqota. Waxaa sababi karo dhawr arimood waxaase ugu badan marka xididada dhiiga u qaada xubinta galmada raga ay wax qaadkoodu hoos u dhacdo ama ay ciriiri noqdaan. Waxay u badan tahay raga qaab nololeedkoodu ay liidato sida kuwa cunada xun, khamriga badsada ama sigaarka caba. Waxaa kaloo keeni kara daawooyin loo qaato in lagu daweeyo cudurada qaarkood. Haddii dhibkaan aad isku aragtid waxaad u baahan tahay inaad u tagtid dhakhtar si laguu baaro ama lagaaga daaweeyo waxa keenay. Ogow dhibkan wuxuu noqon karaa calaamad cudur sida sonkorowga, dufanka dhiiga (Cholesterol) oo badata ama dhiig-karka.
Daawooyinka casriga ah ee lagu daaweeyo waxaa ka mid ah Viagra, Cialis iyo Levitra, waxaana loo sameeyay iyagoo kala awood duwan. Faahfaahin dheeraad oo ku saabsan daawayntiisa fadlan riix halkan ama soo booqo www.dhakhtar.com
Guji halkan si aad u tijaabisid aqoontaada la xiriirta kacisga & himad la’aanta.
Popular post by viewFanaanada Falis Cabdi oo Film Sexy looga duubay Jig jiga . - 139604 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 31895 hitsContact US - 30618 hitsDaawo haweeney Muqdisho ka furatay Guri lagu tunto - Fadeexo - 26181 hitsDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 25653 hitsTopnews:-Wiil uu dhalay Ganacsade Xaaf oo falkii ugu xumaa ku sameeyay Gabar Maskiina +Sawiro? - 25298 hitsThis report no more in Galmudugnews - 23908 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 23067 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 22427 hitsHalkaan ka Daawo Video Xasan Dahir Aweys oo la dejiyay guri burcad badeeda ka dhisteen Cadaado iyo Ciidamada ilaaladiisa - 22381 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 21479 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 21148 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 21142 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 20843 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 19892 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 19884 hitsReal Madrid oo wiilka baabuuniska laga badshey ee Gareth Bale looga diiday 40.milan Euro. - 19286 hitsVOA-Idaajaa iyo Qabyaaladeynta Suugaanta - 18521 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 17828 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 17766 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 17695 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 16911 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 16844 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 15548 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 15499 hits Home Contact US